Kotlin ikozvino mutauro unodiwa kune vanogadzira Android | Linux Vakapindwa muropa
Kotlin ikozvino mutauro unodikanwa wevanogadzira Android
Nhasi en zuva rekutanga re l2019 edition yeGoogle I / O musangano yakatsaurirwa kune vanogadzira, Google yakatora mukana wekuita chiziviso chekuti Kotlin programming mutauro ndiwo mutauro unodakadza yeVagadziri vekushandisa Android.
Kune avo vanotevedzera kana kuti vatoshandisa kare, yayo yekupedzisira inogadziridza (Kotlin 1.3.30), yakaburitswa mwedzi wapfuura, kusanganisira zvinowedzera kuKotlin / Native iyo inoshandisa LLVM kuumbiridza zvinyorwa zveKotlin kupatsanura dhata repabhainari (hapana michina inodikanwa chaiyo) yeakasiyana mashandiro masisitimu uye CPU zvivakwa, kusanganisira iOS. Linux, Windows, Mac uye kunyange WebAssembly uye yakadzamidzirwa masisitimu se STM32.
Tsigiro yepamutemo yeKotlin yekusimudzira Android yakaziviswa kumusangano weGoogle I / O 2017.
Kotlin yekuvandudza Android
YeGoogle Android timu, iyi sarudzo yekutsigira Kotlin yaive nyore kutsanangura.
EDI Tsigiro yeKotlin: Android Studio yakavakirwa paJetBrains IntelliJ IDEA uye timu yeJetBrains yanga ichishanda kwemakore kuverengera kuti Kotlin inoshanda zvisina mutsigo neIntelliJ IDEA.
Google ichagara nhaka yayo yese basa kutsigira Kotlin mu Android Studio. Asi kunze kwechinhu ichi, Kotlin ine zvimwe zvakawanda zvakanaka.
"Kotlin inotaurisa, yakapfupika, inokwenenzverwa, ine simba uye inonakidza kuverenga nekunyora, uye ine inonakidza chengetedzo maficha maererano nekusabatika uye kusachinjika" inoenderana neako maInvestment mukuita kuti zvikumbiro zvive zvakachengeteka uye zvinoshanda nekutadza.
"Kubudirira kweApple kucharamba kuri paKotlin," Google yakanyora muchinyorwa cheblog.
“MaAPI mazhinji matsva nemaJetpack maficha achave aripo kuKotlin kutanga. Kana ukatanga chirongwa chitsva, unofanirwa kuchinyorera muKotlin, "anodaro Google achitsanangura kuti" kodhi yakanyorwa muKotlin inowanzoreva kodhi yakaderera kwauri, kodhi shoma yekunyora, kuyedza, nekuchengetedza. «
Maererano neGoogle, chakanyanya kukosha ndechekuti Kotlin inoshanda pamwe nemitauro yepamutemo ye Android kuvandudza (Java, C ++) uye iyo Android nguva yekumhanya.
Somuenzaniso, kambani yakatsanangura kuti Kotlin inoshanda musina mutauro weJava, zvichiita kuti zvive nyore kune vanogadzira vanoda mutauro weJava kuti varambe vachishandisa, asi zvakare zvishoma nezvishoma wedzera kotlin kodhi uye tora mukana kumaraibhurari eKotlin.
Uyewo, Kotlin kubvumidzwa pa Android yakawedzera zvishoma pamusoro pemakore Uye maererano neGoogle, nekushinga kuri kukura pakati pevanogadzira, chimwe chezvikonzero icho kambani yaida kuunza Kotlin semutauro wepamutemo paApple kuvapa rutsigiro rweKotlin zvirinani Chii chakaitwa kubvira Android Studio 3.0.
Yepamutemo Kotlin rutsigiro rwakabatsira mukukura kwekutorwa kwemutauro munyika yeApple yekusimudzira, kusvika pakatarisirwa nevamwe kuti mutauro weJetBrains uchakurumidza kudzinga Java.
Chero zvazvingaitika, mukana uyu haufanire kutarisirwa kunze, nekuti Sekureva kweGoogle, "vanopfuura makumi mashanu kubva muzana evanogadzira ehunyanzvi eApple ikozvino vanoshandisa Kotlin."
Mukubatana neJetBrains uye neKotlin Foundation, Google inoenderera mberi nekudyara muKotlin zvishandiso zveApple, sezvinoonekwa nekutanga kuburitswa kweApple KTX mu2018, seti yekuwedzera kweiyo Android kukura neKotlin.
Ivo zvakare vanoisa mari muzvinyorwa, kudzidziswa, uye zviitiko kuti vafambise kudzidza mutauro weJetBrains uye nekudaro kugamuchirwa.
Ichi chiziviso kubva kuGoogle hachisi kushamisika, kunyanya sezvo Google ichitsvaga kuzvibvisa kubva kuJava sezvo kambani iri kurwiswa mudare neOracle yekushandisa zvisiri pamutemo maJava APIs paApple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kotlin ikozvino mutauro unodikanwa wevanogadzira Android
Oracle inopisa 900 vanhu muChina. Kuratidzira kunoitika
Flutter: Google UI Sisitimu Inosvika Mamwe Mapuratifomu